“Kidnapping karana” telo tao anatin’ny roa herinandro: nalain’ny jiolahy an-keriny koa i Arman Kamis, DG-n’ny Trans Fy | NewsMada
“Kidnapping karana” telo tao anatin’ny roa herinandro: nalain’ny jiolahy an-keriny koa i Arman Kamis, DG-n’ny Trans Fy
Ny fiarany, 4X4 Touareg, ihany no nitondran’ireo jiolahy dimy, nisaron-tava sady nirongo basy Kalachnikov naka an-keriny an’i Arman Kamis, teratany karana, tale jeneralin’ny orinasa Trans Fy, tao Ampasimazava Toamasina, omaly tolakandro.
Karana iray indray, nisy naka an-keriny tany Tomasina, omaly. Tokony ho tamin’ny 3 ora sy 15 minitra, jiolahy mirongo fiadina sy mitam-basy mahery vaika dimy lahy no sady misarotava naka an-keriny ity Karana antsoina hoe Arman Kamis, tao Ampasimazava tsy lavitry ny orinasany trans FY. Raha ny loharanombaovao, nitondra fiara Peugeot 309 ireo jiolahy raha tao anatin’ny fiarany tsy mataho-dalana Touareg miloka volontany laharana 25541 WWT kosa ilay nalaina an-keriny no nitondran’ ny jiolahy azy nandositra.
Hatramin’ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra, mbola tsy nisy ny fitakiana vola nataon’ireo mpaka an-keriny ireto, araka ny angom-baovao avy amin’ny mpitandro filaminana izay miezaka ny miara-miasa amin’ny fianakavian’ity nisy naka an-keriny ity.
“Matetika roa na telo andro aty aorian’ny fakana an-keriny vao manao ny fitakiana vola ireo mpaka an-keriny mba hahalafo ny vidin’ny ain’ireo olona alainy tahaka izao”, raha ny fanazavana.
Ankoatra izay, araka ny fanazavan’ireo mponina manodidina sy ireo olona nahita ny zava-nitranga, tsy nisy azo natao noho ny basy teny an-tanan’ireto mpaka an-keriny. “Manana endrika miaramila na mpitandro filaminana ireto andian’olona ireto, satria tena matihanina sy haingana ary voalamina mialoha ny fombafomba natao rehetra nandritra ilay fakana an-keriny, ka tsy nisy afaka nihetsika sy tratry ny tampoka avokoa ny rehetra”, hoy ny fanazavana. Andrasana izay mety ho fizotran’ny loharanombaovao avy amin’ny mpitandro filaminana sy ny fianakaviany.
Karana telo tao anatin’ny roa herinandro
Efa nanao fanambarana momba ity fakana an-keriny karana tany Toamasina ity ny CFOIM. Karana fanintelony ity tao anatin’ny roa herinandro. Vao afakomaly no votsotra ilay Karana talen’ny Conforama sy Akoor Digue, ity indray nitranga, omaly. Efa maty paika tanteraka ny teti-dratsin’ireo jiolahy. Toy ny asesin’izy ireo mihitsy ny Karana. Miraviravy tanana ny mpitandro filaminana manoloana izany. Toy ny tsy manan-kery manoloana ireo mpaka an-keriny raha tsy sanatria misy tokoa ny firaisana tsikombakomba amin’ny fakana an-keriny toy izao.